ओलीको चलाखी ! सर्वोच्चको फैसलाले पनि अब माधव नेपाललाई गरेको कारवाही रोक्न सक्दैन, स्पष्टिकरणपत्रमा यस्तो लेखियो – Sapana Sanjal
July 21, 2021 113
Sapana Sanjal : काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि माधव नेपाल पक्षलाई कारवाहीवाट रोक्न नसक्नेगरी नेकपा एमालेको ओली पक्षले चलाखी अपनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले विपक्षमा मतदान गरेकै कारण पार्टीको ह्वीप भन्दै सांसदहरुलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
Prevकठै ! मम्मी रोपाई सकेर आउछु है भनेर माईत बाट घर फर्केको ३ घण्टा नबित्दै घरबाट आएको मृत्युको खबरले सबैलाई अचम्म बनायो
Nextउमेरले ४४ बर्ष टेकेकी पबित्रा पेप्सीकोलाबाट पक्राउ, अब ३ दिन जेल बस्नुपर्ने